Yaa Madaxweyne Mareykanka Ka Noqonaya Hadii Xaaladda Trump Ay Ka Sii Darto? | Gaaroodi News
Yaa Madaxweyne Mareykanka Ka Noqonaya Hadii Xaaladda Trump Ay Ka Sii Darto?
Madaxweyne Trump iyo kuxigeenkiisa Pence ayaa waxaa si rasmi ah bishii Agoosto u soo magacaabay Xisbiga Jamhuuriga
Hargeisa(Gaaroodinews) Iyadoo todobaadyo uun ay ka harsantahay doorashada madaxtinimada ee waddanka Mareykanka, ayaa Donald Trump waxaa laga helay fayraska korona.
Arrintaas waxa ay miiska soo saartay su’aalo ku aaddan waxa dhici kara.
Waa kuwama xafladaha ololaha ee uusan madaxweynuhu ka qeybgalayn?
Isu soo bax Jimcihii lagu qaban rabay Florida ayaa meesha laga saaray. Marka waxaa lagu badelay kulan dhinaca muuqaalka ah oo ay ka soo qeybgaleen madaxda sarsare ee cudurka u liita.
Sharciga Mareykanka ayaa waxa uu qorayaa in afartii sanadoodba doorashada madaxtinimada la qabto Talaada ku xigta Isniinta ugu horraysa bisha Nofeembar, marka Talaadada sanadkan waxa ay u ku aaddan tahay 3-da bisha Nofeembar.
In taariikhda doorashada la badalana waa arrin u taal xildhibaannada Mareykanka, ee madaxweynaha ma badeli karo.
Arrintaasna waxa ay u baahantahay in si aqlabiyad ah ay ku meelmariyaan labada aqal ee koongareeska dalkaasi si ay u badalaan taariikhda doorashadu dhacayso. Taasna wax dhici kara ma ahan, mar haddii ay tahay in la helo codka aqalka wakiillada ee ay maamulaan xildhibaannada Dimuqraadiyiinta. Madaxweyne Trump ayaa mask-ga afka lagu daboosho waxa uu la yimid dooddii koobaad ee madaxtinimada hasayeeshee sawir lagama qaadin isagoo xiran mask-ga
Xitaa haddii taariikhda la badelo, dastuurka Mareykanka ayaa waxa uu dhigayaa in maamulka madaxweynaha uu ku egyahay muddo afar sanadood oo kaliya. Marka, muddo xileedka madaxweyne Trump waxa uu dhacayaa gelinka dambe ee 20-ka bisha Janaayo, 2021.
In taariikhdaas la badalana waxa ay u baahan tahay in wax laga badelo dastuurka. Arrintaasna waxa ay u baahan tahay inay meelmariyaan saddex meelood oo laba meel xildhibaannada Mareykanka ama xildhibaannada gobollada, markaas kaddibna la helo afar meelood oo saddex meel codka gobollada Mareykanka, arrintaas oo iyana ah mid aan suuragalayn.
Wax ka badelistii 25-aad ee dastuurka ayaa waxa ay u ogolaanaysaa madaxweynaha inuu xilka ku wareejiyo kuxigeenkiisa, taas oo ka dhigan in Mike Pence uu noqon doono madaxweynaha xilka sii hayn doona. Markii uu caafimaadkiisa soo hagaagana Mr Trump ayaa dib ugu wareegaya booskiisa. Madaxweyne Trump ayaa waxaa lagu qaaday isla heelikobtarkii Arbacadii raacday Hope Hicks. Hicks ayaa markii dambe laga helay fayraska korona
Haddii Mr Pence uu isna xanuunsado oo waajibaadkiisa gudan waayo, waxaa safka soo galaysa sida uu dhigayo sharciga dadka la wareegaya xilka madaxtinimada qorayaa Nancy Pelosi, oo ah gudoomiyaha Aqalka Wakiillada – taas oo ah xubin ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga – walow khubarada dastuurka ay sheegayaan in xil wareejinta noocaas oo kale ay horseedi karto loollan dhinaca sharciga.
Haddii aanay Pelosi doonayn ama ay qabanwayso xilkaas, waxaa lagu wareejin doonaa Senator sare oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga, haatanna waxaa dowrkaas fadhiya Charles E Grassley oo 87-jir ah. Arrintaas ayey sidoo kale u badantahay in lagala horyimaaddo loollan dhinaca sharciga ah.
Haddii Mr Pence la doorto waa in kuxigeen cusub la soo magacaabaa. Madaxweyne kuxigeenka Mareykanka Penc ayaa xilka la wareegi doona howlaha madaxweynaha hasayeeshee ma noqon doono musharaxa madaxtinimada ee Xisbiga Jamhuuriga
Dimuqraadiyiinta iyo Jamhuuriyiinta ayaanan weligood badelin musharax madaxweyne kaddib markii si rasmi ah loo soo doorto